परीक्षार्थीहरुलाई दुई बर्ष अघिको प्रश्नपत्र वितरण, लापरवाही कस्को ? - E Net Nepal
Home Social News परीक्षार्थीहरुलाई दुई बर्ष अघिको प्रश्नपत्र वितरण, लापरवाही कस्को ?
परीक्षार्थीहरुलाई दुई बर्ष अघिको प्रश्नपत्र वितरण, लापरवाही कस्को ?
hamro yatra 5:33 PM Social News,
२० साउन । दैलेखको नारायण क्याम्पस परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालित एसएलसी पूरक परीक्षामा लापरबाहीका कारण दुई वर्षअघिको प्रश्नपत्र वितरण भएको छ ।
परीक्षा सुरु भएको एक घण्टापछि मात्र पुरानो प्रश्नपत्र भएको कुरा परीक्षार्थीहरूले थाहा पाएका थिए ।
कूल तीन सय ५४ परीक्षार्थीमध्ये २० जनालाई पुरानो प्रश्नपत्र परेको थियो । पुरानो प्रश्नपत्र बाँडिएको थाहा पाएपछि नयाँ प्रश्नपत्र वितरण गरेर परीक्षा सञ्चालन गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी अम्बिकाप्रसाद आर्चायले बताउनुभयो । शिक्षा अधिकारी आर्चायले ५० वटा प्रश्नपत्र गलत परेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले घटनाबारे तत्काल छानबिन गर्नेसमेत जनाउनुभयो ।
By hamro yatra at 5:33 PM